निकालाको जवाफ निकाला, वेलायत र रुसले निकाले २३ कुटनीतिज्ञ
२०७४ चैत ६ मंगलबार, लण्डन । रुसी कुटनीतिज्ञहरुले बेलायत छोड्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई यही मार्च १५ मा एक हप्ताभित्र बेलायत छोड्न समय दिइएको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत ६ मंगलबार, बेइजिङ । चीन सरकारले यसवर्ष करिब १ करोड ३० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । मङ्गलबार बेइजिङमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ्ले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले चीनले सन् २०१८ मा १ करोड ३० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र यी रोजगारीहरु चीनको सहरी क्षेत्रमा सिर्जना गरिनेछ भने। ... बाँकी अंश»
मुम्बई रेलमा विद्यार्थीहरुको कब्जा, यस्तो छ कारण
२०७४ चैत ६ मंगलबार, काठमाडौं । भारतको मुम्बईमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरी रेल सेवा ठप्प पारेका छन् । मुम्बईको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल र माटुंगा रेलवे स्टेशनको बीच भागमा छात्रछात्राहरु रेलको लिगमै कब्जा गरेर बसेका छन् । ... बाँकी अंश»
सम्बन्ध विच्छेदलाई अवैध मान्ने मुलुक अब एउटा मात्रै बाँकी ?
२०७४ चैत ६ मंगलबार, एजेन्सी । विश्वभरका २ वटा मुलुकमा पारपाचुके गर्न अवैध छ, फिलिपिन्स र भ्याटिकन सिटीमा । ... बाँकी अंश»
के पुटिन शान्तिमार्गमा आएका हुन् ? ट्रम्पले किन दिएनन् बधाई ?
२०७४ चैत ६ मंगलबार, काठमाडौं । राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन एकाएक बदलिएजस्ता देखिएका छन् । ... बाँकी अंश»
यूएस बंगला विमान दुर्घटना : २३ शव बङ्लादेश पुर्‍याइयो
२०७४ चैत ५ सोमबार, ढाका । नेपालमा केहीदिन अगाडी भएको विमान दुर्घटनामा परी निधन भएका बङ्गलादेशी नागरिकहरुको शव सोमबार स्वदेश ल्याइएको छ । स्वदेश फिर्ता ल्याइएका २३ ओटा शवको सामुहिक शवयात्रा गराउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत ५ सोमबार, दमासकस । सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित अफ्रिन सहरलाई टर्कीको सेनाको सहयोगमा यहाँका अर्धसैन्य लडाकूहरुले नियन्त्रणमा लिएका छन् । उक्त सहरको मध्यभागमा टर्कीको सेना प्रवेश गरेको समाचार शनिबार नै आएको थियो । आइतबार सेनाले सो भागलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको छ । ... बाँकी अंश»
रुसी राष्ट्रपतिमा पुटिन ७६.६७ प्रतिशत मत सहित पुन: निर्वाचित
२०७४ चैत ५ सोमबार, मस्को। रुसको राष्ट्रपतिमा पुनः वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नै निर्वाचित हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार यहाँको अधिकांश मत गनिसक्दा उनको मात्र लगभग ७६.६७ प्रतिशत मत देखिएको छ। यो उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धीको तुलनामा निकै नै बढी हो। ... बाँकी अंश»
पुटिनले लगाए लाहाछाप, ६ वर्षका लागि फेरि रुसको राष्ट्रपति
२०७४ चैत ५ सोमबार, काठमाडौं । भ्लादिमिर पुटिन फेरि रुसको राष्ट्रपति भएका छन् । आइतबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनी भारी अन्तरले विजयी हुँदै फेरि ६ वर्षका लागि रुसमाथि राज गर्नेछन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत ४ आइतबार, रुस। रुसमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आइतबार रुसी नागरिकले मतदान सुरु गरेका छन्। रुसी महासंघको पूर्वी क्षेत्र काम्चाट्का र चोकोट्कामा आइतबार बिहान स्थानीय समय अनुसार ८ बजे मतदान सूरु गरिएको छ। रुसको भूभाग निकै ठूलो रहेको र यसका कारण यहाँको समयमा पनि फरक पर्ने भएकोले ती बाहेकका रुसका अरु कैयौँ क्षेत्रका मतदाताले भने मतदानका लागि घन्टौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। ... बाँकी अंश»
श्रीलङ्कामा संकटकाल हट्यो
२०७४ चैत ४ आइतबार, कोलम्बो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले देशव्यापी रुपमा लगाइएको संकटकालीन अवस्था हटाउनु भएको छ। यही मार्च ६ तारिखबाट घोषणा गरिएको संकटकालीन अवस्था हटाइएको राजपत्रमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले आइतबार हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसपछि संकटकालीन अवस्था हटेको जानकारी अधिकारीहरुले दिएका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत ४ आइतबार, काठमाडौं । तेज रुपमा आफ्नो शक्ति विस्तार गरिरहेको चीनले पछिल्लो समय अमेरिकाको एशियाको माथिको प्रभुत्वको लागि चुनौती दिन थालेको छ । ... बाँकी अंश»
रुसले २३ जना बेलायती कूटनीतिज्ञलाई निकाल्यो
२०७४ चैत ३ शनिबार, मस्को, रसिया । पूर्व रसियाली गुप्तचरमाथि भएको हमलालाई लिएर तनाव चुलिरहँदा रसियाले २३ जना ब्रिटिश कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको शनिबार रसियाली विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत ३ शनिबार, बेइजिङ । चीनको संसदमा शनिबार बिहान भएको निर्वाचनबाट चिनियाँ वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनफिङ नै पुन: निर्वाचित भएका छन् । चीनको संसदका रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनकंग्रेसको जारी बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
एकपछि अर्का सहयात्री ट्रम्पसँग छुट्टिए, अब छुट्टिने पालो छोरा बुहारीको
२०७४ चैत २ शुक्रबार, एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा, डोनाल्ड ट्रम्प जुनियर र उनकी श्रीमती वनेस्सा ट्रम्प छुट्टिने भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत २ शुक्रबार, नयाँ दिल्ली । वाईएसआर कांग्रेसले आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष राज्यको मान्यता दिन लागिएको विषयलाई लिएर मोदी सरकारमाथि अविश्वासको ... बाँकी अंश»
२०७४ चैत २ शुक्रबार, काठमाडौं । अमेरिकाको फ्लोरिडा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको पुल भत्किँदा कम्तिमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
सिरियाली गृहयुद्धको आठौँ वर्ष : तीन लाख ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु , २ करोड विस्थापित
२०७४ चैत १ बिहिबार, बेरुत । सिरियामा जारी रहेको गृहयुद्ध बिहीबार आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २०११ को मार्च १५ बाट त्यहाँ राष्ट्रपति बसर अल असदको राजिनामा माग्दै जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । तर उक्त आन्दोलनमा सरकारको व्यापक दमन र हिंसाका कारण दुई वर्षमात्र पछि सो आन्दोलन गृहयुद्धकारुपमा परिणत भएको थियो । ... बाँकी अंश»
जर्मन चान्सलरमा मर्केल चौँथो कार्यकालका लागि निर्वाचित
२०७४ चैत १ बिहिबार, बर्लिन । जर्मन चान्सलरमा एन्जेला मर्केल फेरी निर्वाचित भएकी छन् । जर्मनीको संसदले बुधबार उनलाई चौँथो कार्यकालका लागि चान्सलरमा निर्वाचित गरेको हो । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक जर्मनीमा उनको लोकप्रियतालाई लिएर विश्वभरी नै चर्चा भएको छ । ... बाँकी अंश»
बेलायतले तोड्यो रुससंगको उच्चस्तरीय सम्पर्क, २३ कुटनीतिज्ञ देशनिकाला
२०७४ चैत १ बिहिबार, काठमाडौं । बेलायतले रुससंगको उच्चस्तरीय सम्पर्क तोडेको छ । रुसले अनावश्यक बखेडा झिकेपछि बेलायतले उच्चस्तरीय सम्पर्क तोड्दै २३ जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई पनि देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको हो । ... बाँकी अंश»